Duubabka Gobolka Hiiraan iyo Danjiraha IGAD oo ka wada hadlay Maamul u sameynta Hiiraan iyo Sh.Dhexe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 23 June 2016 23 June 2016
Baladweyne (Mareeg)—Wakiilka Urur Goboleedka IGAD u qaabilsan arimaha Soomaaliya, Maxamed Cabdi Afeey iyo Wafdi uu hogaaminayo oo ku sugan Magaalada Baladweyn ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa kulamo kala duwan la qaatay qaar ka mid ah Duubabka Gobolka Hiiraan.
Kulamadan u dhaxeeyay Mas’uuliyiinta Ururka IGAD iyo Duubabka Gobolka Hiiraan qarkood ayaa waxaa looga hadlayay arimo la xiriirka Shirka Maamul u sameynta Gobolada Hiiraan iyo Sh.Dhexe.
Duubabka Gobolka Hiiraan ayaa hordhigay Danjiraha IGAD qodobo ay horay ugu kala tageen Madaxda Dowladda Federaalka, waxaana qodobaadkaasi ka mid ahaa in Shir dib u heshiisiineed loo qabto Dadka wada degga Gobolada Hiiraan iyo Sh. Dhexe ka hor inta aan Maamul mideysan loo dhisin.
Mas’uuliyiinta Urur Goboleedka IGAD ayaa aqabalay qodobada ay soo jeediyeen Odayaasha, waxaana ay sheegeen in ay dib isugu laabanayaan.
Nabadoon Dacar Xersi Nuur, Guddoomiyaha Odayaasha Dhaqanka Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in kulamo looga hadlaya arimaha Shirka Maamul u sameynta ay la qaateen Mas’uuliyiinta Ururka IGAD.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa Nabadoon Dacar Xersi Nuur ayaa waxuu soo hadal qaaday arinta ku saabsan in Shirka Maamul u sameyna labada Gobol loo weeciyay Magaalada Muqdisho, waxuuna qeexay in aysan waxba ka ogeyn, ayna qaadaceen Shirkaasi.
Shirka Maamul sameynta Gobolada Hiiraan iyo Sh.Dhexe oo muddo gogoshiisa ay taallay Magaalada Jowhar ayaa Maamulka Gobolka Sh.Dhexe waxuu shaaciyay in loo weeciyay Magaalada Muqdisho, si halkaasi loogu soo dhameystiro.